टाटा सुमोद्वारा यात्रु ठगिंदै, वीरगंज काठमाडौंको भाडा आठ सय असुली
प्रस, वीरगंज, १५ कात्तिक/ वीरगंज–काठमाडौं चल्ने टाटा सुमोले ठगी गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ । शुभयात्रा यातायात सङ्घद्वारा सञ्चालित टाटा सुमो बोलेरोले निर्धारित भाडा दरभन्दा दोब्बर भाडा असुल गरिरहेको खुलासा भएको छ । आज बिहान वीरगंजबाट काठमाडौं हिंडेको २७६९ नम्बरको टाटा सुमोले सुमोमा सवार दशजना यात्रुमध्ये आठजना यात्रुसँग प्रतिव्यक्ति रु. ८०० को दरले भाडा लिएको थियो । भाडा रु. ८०० लिएको भए तापनि टिकटमा रु. ४९० मात्र उल्लेख गरेको सिट नं. १ का यात्रु हीरालाल श्रेष्ठले काठमाडौंबाट टेलिफोनमार्फत् प्रतीकलाई जानकारी गराएका छन् । त्यसैगरी सोही सुमो सिट नं. २ का यात्रु डम्बरबहादुरले पनि सुमोले प्रतिव्यक्ति रु. १ हजार मागेको र अन्तमा ८०० मा सहमति भए पनि टिकटमा ४९० मात्र उल्लेख गरेको जानकारी गराएका छन् । काठमाडौं जाने प्राय: सुमोहरूले हजार वा आठ सय भाडा माग्ने गरेकाले वास्तविक भाडा कति हो अन्योल उत्पन्न भएको यात्रुहरूले बताएका छन् । टिकटमा थोरै भाडा लेखेर बढी असुली गरेकोबारे यात्रुले सोध्दा सुमो चालकहरूले बढी भत्ता माग्न थालेकाले बढी रकम असुल गर्नुपरेको वीरगंज काउन्टरक
पर्दाफाशका प्रकाशक साहमाथि अज्ञात समूहद्वारा हमला
प्रस, वीरगंज, १५ कात्तिक/ प्रेस चौतारी नेपाल पर्साका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष एवं पर्दाफाश दैनिकका प्रकाश राघव साहमाथि म·लवार राति अपरिचति दुईजना व्यक्तिले साङ्घातिक हमला गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । वीरगन्ज उपमहागनरपालिका–१२ मा रहेको कार्यालयबाट काम सिध्याएर राति घर जान लागेको बेला कृषि औजार अनुसन्धान कार्यालय अगाडि दुईजनाले बाटो सोध्ने बहानामा साहमाथि हमला गरी फरार भएको पीडितले बताएका छन् । दुईजनाले हानेको फलामको रडले उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ । घटनाप्रति क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ, पर्सा शाखा, पत्रकार महासङ्घ पर्सा, मधेसी पत्रकार समाजलगायतले विज्ञप्ति निकाली दोषीलाई कारबाई गर्न माग गरेका छन् । घाइते साहले नगदसहित पर्स र मोबाइल सेट लुटिएको जनाए ।
दशैं बिदापछि कार्यालय खुले पनि कार्यालय प्रमुखहरू अनुपस्थित
उपेन्द्र यादव, कलैया, १५ कात्तिक/ बाराका सरकारी कार्यालयहरू दशै बिदापछि खुले पनि अधिकांश कार्यालयका प्रमुखहरू अनुपस्थित छन् । सदरमुकाम कलैयास्थित जिल्ला विकास समिति कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा सदरमुकाम भन्दा बाहिरका जिल्ला वन कार्यालय प्रमुखहरू म·लवार कार्यालय खुले पनि बुधवारसम्म अनुपस्थित रहेका छन् । लामो समयको बिदापछि कार्यालयहरू खुल्दा सेवाग्राहीहरूको भीड लाग्ने गरे पनि कार्यालय प्रमुखहरू नहुँदा सेवाग्राही रित्तै हात फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा अनुपस्थित रहेका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले छड्के गरी अनुपस्थित कर्मचारीहरूलाई निजामति सेवा नियमावली अनुसार कारबाई गर्ने व्यवस्था रहेकोमा जिप्रका मौन बसेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रवक्ता थमन सिंह थापाले बिदापछि कर्मचारीहरू आउने क्रम जारी रहेकोले अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई कारबाई नगरिएको बताए ।
पोखरिया अस्पतालका रोगीहरू क्लिनिक तर्फ
प्रस, वीरगंज, १५ कात्तिक/ पोखरिया अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूले रोगीहरूलाई सेवा लिन निजी क्लिनिक तर्फ पठाउने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । पोखरिया अस्पतालमा दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू पोखरिया बजारमा सञ्चालित विभिन्न निजी क्लिनिकमा काम गरिरहेका छन् । निजी क्लिनिकमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले सेवाग्राहीलाई अस्पतालमा औषधि छैन, चिकित्सक छैन भन्दै क्लिनिकतिर पठाउने गरेका छन् । अस्पतालमा निजी स्रोतमा काम गर्ने लालबाबू साह रौनियारले कार्यालय समयमा उपचार गराउन गएका परशुरामपुर–१ निवासी अनुप कुमारलाई निजी क्लिनिकमा जान लगाएको अनुपले बताएका छन् । पोखरिया अस्पतालमा २ घण्टा कुर्दा पनि उपचार नपाएको र त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूले अस्पतालमा औषधि र चिकित्सक छैन भन्दै नजिकको क्लिनिकमा जान सल्लाह दिएको उनले बताए । अस्पतालमा उपचार नपाएका अनुपलगायत ग्रामीण बासिन्दाले पोखरिया बजारमा सञ्चालित एउटा निजी क्लिनिकमा उपचार गराई घर फर्केको प्रतीकलाई बताएका छन् ।
चाडपर्वमा सरसफाइ र हाम्रो समाजको प्रवृत्ति
- सञ्जय साह ‘मित्र’ धानको रोपाइ सकिएपछि नेपालमा चाडपर्वको दिन शुरु हुन्छ । चाडपर्वहरू मानवीय समाज र संस्कृतिका वास्तविक सम्पत्ति हुन् । यो सामाजिक–सांस्कृतिक सम्पदाहरू दिन प्रतिदिन संसारबाट लोप हुने र नयाँ नयाँ चलनहरू आउने समाजको प्रवृत्ति हो । हरेक समाजले नयाँपन चाहेको हुन्छ । नयाँपनको खोजीमा कोही पूरै अरूलाई नै अ·ीकार गर्न सकेको हुन्छ, यस प्रकारको अन्धानुकरणले सम्बन्धित समाजको स्वत्व लोप भएर जाने डर हुन्छ । कतिपयले सिर्जनात्मक अनुकरण गर्दछ जो कालान्तरमा कोलाज बन्न जाने हुन्छ । कतै यस्तो पनि देखिएको छ कि धेरै नक्कल हुने समाजबाट पनि अनुकरण भइरहेको हुन्छ । अहिले के सुनिन थालिएको छ भने पाश्चात्य जीवनमा साडी, सिउँदोमा सिन्दुर, चुरा, निधारमा रातो वा पहेंलो टीकाजस्ता कुरा देखिन थालिएको छ रे । यो फेसनमात्र पनि हुन सक्तछ वा पूर्वीय जीवन पद्धतिले मोहनी लगाएको पनि हुन सक्छ । सिन्दुर, साडी र चुरामा बाँधिएकी महिलामा पतिप्रति हुने असाधारण आस्थाले आकर्षण गरेको हुन सक्छ । कतिपयले निहुरेर गुड मर्निङ गरेको पनि देखिन्छ रे । पूर्वी एसिया मुख्य गरी जापानमा अभिवादन गर्दा शिर झुकाउने चलन उत्कर्षमा छ ।
आधुनिक इँटा उद्योगको नाममा चुरेक्षेत्र विनाशको तयारी
जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १५ कार्तिक/ राज्यको ऐन कानुन र प्राकृतिक नियम मिचेर बारामा ख्क्द्यप् इँटाभट्टा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । जिल्लाको रतनपुरी–२ स्थित मानवबस्तीबीच इँटाभट्टा सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । इँटा उत्पादनका लागि भट्टीको स्थपना बस्तीबाट कम्तीमा ५ सय मिटर टाढा रहनुपर्ने घरेलु तथा साना उद्योग विभागको कार्यविधि दिग्दर्शन २०६८ मा उल्लेख भएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । रतनपुरी–२ मा जेठ २५ गते जय शक्तिश्वर इँटा उद्योग दर्ता गरी बस्ती आसपास चलाउन इजाजत दिइएको छ । उक्त इँटा उद्योग निर्माणस्थलको तीनै तर्फ सोही वडाका बस्तीहरू छन् । पूर्व तर्फ घनाबस्ती नभए पनि फाटफुट घरछन् । दिग्दर्शनको अपव्याख्य गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाराले इँटा उद्योग सञ्चालन अनुमति दिएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र उद्योग सञ्चालकले भने चिम्नी राख्ने तयारीमा रहेको स्थानमा बस्ती नभएको जिकिर गर्दै प्राप्त गरेको इजाजतपत्र कानुनस·त रहेको बताउँछन् । आधुनिक प्रविधिबाट तयार हुने ख्क्द्यप् अर्थात् भर्टीकल सफ्ट ब्रिक क्लिन इँटा उद्यो
गरीब जनतासँग खेलवाड
यसै त नेपाली जनता गरीब छ, त्यसमाथि शिक्षाको कमीले गर्दा अज्ञानता पनि त्यतिकै छ । यस अवस्थामा केही जानेबुझेकाहरूका लागि नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाएर, सस्तोको लोभ देखाएर ठगी गर्नु सजिलो भएको छ । ठगी गरे तापनि सार्‍है नोक्सानी नहुने क्षेत्र छ भने सहन गर्न सकिएला तर स्वास्थ्य, त्यो मानिसको होस् वा पशुको अति नै संवेदनशील क्षेत्र भएको हुँदा स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नु कुनै पनि अवस्थामा सहय मान्न सकिंदैन । मानिसको त कुरै छाडौं, गरीब जनताले आजीविकाका लागि प्रत्यक्ष अथवा प्रच्छन्नरूपमा पालेको पशुधनको पनि गलत औषधिका कारण क्षति हुनु वा औषधिको नाममा नक्कली अथवा म्याद गुज्रेका औषधिहरूको प्रयोग हुनुलाई कदाचित क्षम्य मान्न सकिंदैन । तर यस्ता म्याद गुज्रेका औषधिहरू पनि मुलुकमा भित्र्याइँदै छ । हाम्रो शहर बजारमा म्याद गुज्रेका यस्ता औषधिहरू मात्र होइन, खाद्य पदार्थलगायत अन्य दैनिक उपभोगका वस्तुहरूसमेत, उपभोक्ताको चनाखोपनको अभावका कारण म्याद गुज्रेका बेच्ने गरिन्छ वा नयाँ म्यादको ठप्पा लगाएर बिक्री गर्ने गरिएको पाइएको छ । यस्तो निकृष्ट काम गरेबापत केही व्यक्तिलाई, मिलोमतोमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरूल
म्याद गुज्रेको औषधिमा भंसारको मिलेमतो
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ म्याद गुज्रेको औषधि नेपाल भित्र्याउने गिरोहसँग वीरगंज भंसारको मिलेमतो रहेको कुरा पर्दाफाश भएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताले दुई ठेला भारतीय औषधि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेपछि उक्त रहस्य खुलेको हो । वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताको टोलीले आइतवार दिउँसो दुई ठेला भेटेनरी औषधि घडिअर्वा नजिक मुख्य सडकबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । भंसार कम मूल्याड्ढन गरी राजस्व छली गरेर नेपाल भित्र्याइएको सुराकको आधारमा नियन्त्रणमा लिएको उक्त औषधिको म्याद समेत नाघेको आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । तीन मार्च २०१२ सम्म उपयोग मिति उल्लेख रहेको उक्त औषधिको मूल्य ५५ हजार भारु पर्छ । सात महिना म्याद गुज्रिसकेको औषधिको मूल्याड्ढन वीरगंज भंसारले नेरु. १० हजार मात्र गरेको छ । नेपाल भित्र्याउन वर्जित म्याद गुज्रिसकेको औषधि आयात गर्ने कार्यमा भंसारका कर्मचारीलगायत औषधि तस्करहरूको मिलेमतो रहेको र यसरी भित्र्याइएको औषधिमा उपभोग मिति नयाँ बनाएर बजार पठाउने गरेको नाम नछाप्ने शर्तमा वीरगंका एकजना औषधि व्यावासीले बताएका छन् । यसरी नयाँ उपभोग मिति तथा नयाँ र
शारीरिक तन्दुरुस्ती नै मानवको सम्पत्ति– पतंजलि योग प्रमुख
प्रस, जीतपुर, १४ कात्तिक/ “मानव जातिको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति शारीरिक तन्दुरुस्ती हो । मानव स्वास्थ्यको लागि विश्वभरि हामी सेवारत छौं, नेपाल र नेपालीलाई रोगमुक्त बनाउने अभियानमा लागेका छौं ।” यस कार्यमा सबै पक्षको सहयोग जरुरी भएको महिला पतञ्जलि योग समिति नेपालकी प्रमुख हेमा ढु·ानाले आज जीतपुरमा आयोजित एक समारोहमा बताइन् । बारा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जीतपुरद्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ढु·ानाले नेपाल र नेपालीलाई रोगमुक्त तथा कृषि उत्पादन विकासको लागि काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, पोखरामा करिब एक सय बिघा खेती योग्य जग्गा खरिद भइसकेको र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन भइरहेको र यस क्षेत्रमा पनि सोको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री गर्ने लक्ष्य भएकोले इच्छुक नागरिकले सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिन् । विश्व पतञ्जलि योग समितिका महामन्त्री बालकृष्ण शिरोमणि नेपाली भएकाले आफू जन्मेको नेपाल र नेपालीहरूलाई रोगमुक्त पार्न यो अभियान थालिएको बताइन् । आफ्नो जन्मथलो वीरगंज भएकोले यस भेगलाई रोगमुक्त गर्ने व्यक्तिगत स्वार्थ छ भन्दै यस काममा सक्दो सहयोग गर्ने महिला पतञ्जलि योग सम
हिन्दू राज्य कायम गर– साधु महासङ्घ
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ नेपाल साधु महासङ्घले मुलुकलाई हिन्दू राज्य कायम गर्न माग गरेका छन् । महासङ्घले आज वीरगंजमा पत्रकार सम्मेलन गरी पुन: हिन्दू राज्य घोषणाका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने बताए । सङ्घर्षको चरण अनुसार कात्तिक १८ गते घण्टाघर चोकमा नारायणी अञ्चलस्तरीय साधु सम्मेलनको तयारी पूरा भएको पनि महासङ्घले जानकारी गराएको छ । पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल साधु महासङ्घका संस्थापक एवं संरक्षक सेवक सौरभनाथ बाबाले विदेशीको इशारामा नेपाललाई राजनीतिक दलका नेताहरूले धर्म निरपेक्ष घोषणा गरेको आरोप लगाए। उनले हिन्दू राज्य कायम नभएसम्म साधुको नेतृत्वमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई विश्वभरबाटै एकीकृत गर्दै निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताए । सो अवसरमा हिन्दू युवा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योतिलाल साह कलवार, विश्व हिन्दू महासङ्घ, पर्साका अध्यक्ष राजकिशोर चौबे, उपाध्यक्ष पृथ्वीप्रसाद झा, समाजसेवी पशुपति विक्रम शाह, हिन्दू युवा सदस्य राजकुमार साहलगायतले सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तक्र्रिया गरेका थिए।
माछापुच्छ्रेको एटिएममा आगलागी
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ माछापुच्छ्रे बैंकले वीरगंज आदर्शनगरमा सञ्चालन गरेको एटिएम बुथमा आगलागी भएको छ । आज दिउँसो ३:३० बजे पैसा निकाल्न गएका एक ग्राहकले एटिएम बुथबाट धूवाँ निस्किएको देखेपछि आसपासका मानिसलाई खबर गरेका थिए । घटनास्थलमा एसटिएफ प्रहरी र वीरगंज उपमहानगरपालिकाको वारुणयन्त्र तुरुन्तै पुगेको थियो । बुथको विद्युतीय उपकरणमा जडान गरिएको तार सर्ट भएर आगलागी भएको विद्युत् प्राविधिकले बताएका छन् । आगलागीबाट के कति क्षति भयो भन्ने यकिन अनुसन्धान भइरहेको बैंकले जनाएको छ ।
सामाजिक उपेक्षाका कारण डोम समुदायका बालबालिका अध्ययनबाट वञ्चित
सुषमा शर्मा, वीरगंज, २४ असोज/ “यस्ता लेख्नेहरू धेरै आए, सोधपुछ पनि धेरैले गरे तर कसैले केही गर्न सकेन, हाम्रो दु:खलाई सुखमा परिवर्तन गर्न कसैले सकेन”, लाल पर्सा–७ की डोम समुदायकी महिला मायादेवीले सञ्चारकर्मीलाई देख्ने बित्तिकै गुनासो पोखिन् । लालपर्सा–७ मा डोम समुदायको पाँच घर छ । प्रत्येक घरमा ४–४ जना बालबालिका छन् । बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरू आफ्ना बाबुआमाले गर्ने काममा सहयोग गरेर समय बिताउँछन् । बालबालिका विद्यालय किन नपठाएको भनी सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा एकजना डोम अभिभावक बताउँछन्– “बच्चाहरूलाई विद्यालय भर्ना गर्न विद्यालयले जन्म दर्ता माग्छ । हाम्रो बच्चाहरूको जन्म दर्ता छैन ।” जन्म दर्ता गराउने प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको र गाविस सचिवकोमा जाँदा कहिल्यै भेट नहुने उनीहरूको भनाइ छ । ज्याला मजदुरी बनिबुतो गरेर बिहान बेलुकीको छाक टार्नुपर्ने भएकोले पनि सचिव खोजेर बस्ने फुर्सद नभएको किसुन डोमले बताए । डोम समुदायलाई घरमैं आएर जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता तथा विवाह दर्ता बनाइदिने व्यवस्था सरकारले गरिदिए राम्रो हुने उनले बताए । त्यस समुदायका १६ बालबालि
राष्ट्रिय आर्चरी प्रतियोगिता काठमाडौंमा हुने
काठमाडौं, १४ कात्तिक/रासस नेपाल आर्चरी सङ्घको आयोजनामा यही कात्तिक १६ गतेदेखि १८ गतेसम्म प्रथम इन्डोर आर्चरी राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल आर्चरी सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार प्रतियोगितामा देशभरका सयजना खेलाडीले सहभागिता जनाउने छन् । नेपालमा पहिलोपटक सञ्चालन हुन लागेको यस प्रतियोगितामा पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष दुई, महिला दुई र महिला तथा पुरुष मिश्रित टिम गरी पाँच स्पर्धामा हुने जनाइएको छ । प्रत्येक स्पर्धाका प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय हुने खेलाडीलाई जनही क्रमश: रु. ७ हजार, ५ हजार र ३ हजार पुरस्कार, पदक तथा ट्रफी प्रदान गरिने छ । तीन दिने प्रतियोगिता त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा सञ्चालन हुनेछ । प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरूले १५ मिटरको दूरीमा राखिएको तारोमा धनुकाणले निशाना लगाउनुपर्नेछ।
सफल पोखरा कप शुरु, उद्घाटन खेलमा सशस्त्र विजयी
पोखरा, १४ कात्तिक/रासस कास्की जिल्ला फूटबल सङ्घको आयोजनामा आजदेखि पोखरा रङ्गशालामा सफल पोखरा कप अन्तर्राष्ट्रिय फूटबल प्रतियोगिता शुरु भएको छ । उक्त प्रतियोगितामा तीन विदेशीसहित १२ टोलीको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगिताको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामाले उद्घाटन गर्दै पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद केन्द्र बनाउन लागिएको बताए । प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा सशस्त्र प्रहरी बलले एनआइबिएल फ्रेन्ड्स क्लबलाई ४–३ गोलले पराजित गरी क्वाटरफाइनल प्रवेश गरेको छ । भोलिको खेल पोखरा–११ र एनआरटीबीच हुनेछ ।
- विनोद गुप्ता यसपालिको दशैं मेरो लागि अत्यन्त उपलब्धिपूर्ण रह्यो । यस अर्थमा होइन कि हामीले धेरै खायौं–पियौ र मोजमस्ती गर्‍यौं । यस दशैं बिदाभरि घरमा बसिरहँदा अध्ययन र इडियट बक्स भनिने टेलिभिजनको कार्यक्रम निरन्तर हेरिरहँदा थाहा नभएका केही कुरा थाहा पाइयो । दशैं दुईवटा कारणले मनाइदो रहेछ । एउटा जगत्जननी माता दुर्गा भवानीबाट भएको महिषासुर वध र अर्को रावणको वधको लागि । पहिलो महिषासुर वधको लागि भगवान् शड्ढरले माता पर्वतीलाई अनुरोध गर्दै शक्ति प्राप्त गर्न आफ्नो वक्षस्थलमा पाइला टेकी अगाडि बढ्नुपर्ने शर्त राखेकोले माताले त्यसलाई आफ्नो पत्नी धर्म प्रतिकूल भएकोले यसलाई कदापि स्वीकार गर्न नसक्ने भनी अस्वीकार गर्नुभएको हो भन्ने कुरा थाहा पाइयो । आजसम्म ममा कमसेकम महिषासुर वधपश्चात् अन्य अनिष्ट नहोस् भनेर देवीलाई रोक्न महादेव अगाडि लम्पसार परेका हुन् भनेर मात्रै थाहा थियो । जे भए पनि माता पार्वतीको अस्वीकारलाई स्वीकारमा परिवर्तन गर्न महादेवले संसारको चर्चा गर्दै यसको सृष्टि, सञ्चालन र विकासको लागि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेशको रचना गरेको र यी तीनै स्वरूपलाई निरन्तर शक्ति प्रदान गर्न लक्ष्मी
पहिले–पहिले मानिस आफ्नो आवश्यकताको वन्यसामग्री बडो कठिनाइका साथ बयलगाडा वा अन्य शक्तिशाली साधन प्रयोग गरेर गाउँ–घरसम्म ल्याउने गर्दथे । यद्यपि हिजोका मानिस अनुकूल हावापानी, भोजनको शुद्धता आदिले आजका भन्दा बलिया र सङ्घर्षशील थिए । कसैकसैमा अतुलनीय शक्ति हुन्थ्यो उसले जेसुकै गर्न सक्दथ्यो त्यो बेग्लै कुरा हो । कीकर (बबुल) को रूख नै उखेल्ने एकजना व्यक्ति थिए, उनको नाउँ नै पछि कीकर पहलवान रहन गयो । सामान्यत: मानिसहरू आफ्नो आवश्यकताको काठ–दाउरा ल्याउन ज·लसम्म कुनै ठूलै साधन लग्ने गर्दथे । आज काठ–दाउरा ल्याउन यी शक्तिशाली साधनको कुनै आवश्यकत पर्दैन । एउटा सानो साइकलमा पनि अपत्यारिलो किसिमले मानिसहरू ज·लबाट ठूला–ठूला फन्टा बोकेर ल्याउने गर्छन् । किनकि उनमा इच्छाशक्ति छ । त्यही इच्छाशक्ति हाम्रो प्रहरी जवानहरू, वन कार्यालयका कर्मचारीहरूमा हुँदो हो भने चोरी तस्करीका काठ–दाउरा समात्न उनीहरूलाई नागरिकको सहयोग, विदेशी गाडी र शक्तिशाली हतियार चाहिने थिएन । आज वन–ज·ल विनाश भइरहेकोबारे जताततै गुनासो सुनिन्छ । सरकारले सम्बद्ध निकायलाई पर्याप्त साधन–स्रोत नजुटाइदिएको आरोप लगाइन्छ । आज गाउँ–गाउँ
धानखेतमा युवकको लाश मृतकको पहिचान खुलेको छैन
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएको छतवा गाविस–६ टोल खेसरियामा आज साँझ ५ बजे ३० वर्षीय युवकको लाश खेतबारीमा फेला परेको छ। युवकको घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको र स्थानीय बासिन्दाले लाश धान खेतमा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। युवकको हालसम्म सनाख्त भएको छैन। नेपाल भारत सीमासँग जोडिएको उक्त घटनास्थल नेपालभित्र पर्दछ। भारतीय अपराधीहरूले युवकको हत्या भारतमैं गरी लाश नेपाली भूभागमा फालेको हुन सक्ने बारा प्रहरीको अनुमान छ। युवकको दुवै हाथ पछाडि बाँधिएको अवस्थामा आज साँझ ६ बजे बारा प्रहरीले फेला पारी पोस्टमार्टमका लागि कलैया अस्पताल पठाएको छ। खेतमा गाई–भैसी चराउन गएका व्यक्तिहरूले युवकको लाश देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको कन्ट्रोल शाखाले जनाएको छ। घटनास्थल सीमा क्षेत्रभन्दा ३० मिटरको दूरीमा नेपालभित्र पर्छ। एक प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार धान खेतमा सो युवकको लाश सामान्य तरिकाले फालिएकोले युवकको हत्या अन्यत्र भएको हो। युवकको पहिचान खुलाउन भारतीय प्रहरीसँग सम्पर्क गरिसकेको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादीद्वारा शुभकामना कार्यक्रम
उपेन्द्र यादव, बारा, १३ कात्तिक/ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी बाराले सोमवार कलैयामा दशैं, तिहार, दिपावली, छठ र बकरीदको अवसरमा शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व सभासद् प्रमोद गुप्ताले मधेसी जनताले मधेसको हक अधिकारको लागि आवाज उठाउने पार्टीलाई चिन्नुपर्ने बताएका थिए । पार्टीका जिल्ला संयोजक पारस साहले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा फोरम गणतान्त्रिकका के.स. उमेश लालखदास, श्याम गुप्ता, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी साह, भारतीय महावाणिज्य दूतावासका प्रतिनिधि जसपाल सिंह, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विनोद साह, वीरेन्द्र महतोलगायत विभिन्न राजनैतिक दलका व्यक्ति, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले शुभकामना आदानप्रदान गरेका थिए। अतिथिहरूका लागि मधेसी संस्कृति झल्कने मनोरञ्जनको व्यवस्था उक्त अवसरमा गरिएको थियो। परवानीपुरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम : त्यस्तै लिपनी परवानीपुरद्वारा आयोजित बडादशैं, दीपावली, छठ एवं बकर ईदको शुभ अवसरमा परवानीपुर बजारमा शुभकाम
प्रतीक संवाददाता पटेललाई पितृशोक
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ प्रतीक दैनिकका परवानीपुर संवाददाता राधेश्याम पटेललाई पितृशोक परेको छ । पटेलका बुवा ८७ वर्षीय नथुनी राउत कुर्मीको उपचार काठमाडौंमा भइरहेको बेला आज दिउँसो २ बजे मृत्यु भएको थियो । उनी लामो समयदेखि दमको बेथाले पीडित थिए । उनका चार छोरा र तीन छोरी छन् ।
भुइँमैं बसेर पढ्न बाध्य छन् विद्या मन्दिरका विद्यार्थीहरू, रकम कुम्लाउने प्रअ माथि अझै कारबाई भएन
जीतलाल श्रेष्ठ, बारा, १३ कात्तिक/ ‘शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी’ भन्ने वाक्यांशलाई यो विद्यालयले प्रस्ट पारेको छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानीको सदुपयोग नभएपछि विद्यालयको भवन बनाउन नसक्दा हावाहुरी, गर्मी, जाडो, वर्षाका बेला पनि विद्यार्थीहरू यसरी नै भुइँमैं बसेर पढ्न बाध्य हुनुपरेको छ । बारा उत्तर झिटकैया–४ स्थित श्री विद्या मन्दिर नेराप्राविका अधिकांश विद्यार्थीहरूले केही वर्ष यतादेखि नै भुइँमैं बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको अभिभावकहरू बताउँछन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारामा विद्यालय निर्माण, विकास, सुधारका लागि आर्थिक रकम आउने गरेपछि आर्थिक चलखेलले विद्यालयले पाउनुपर्ने रकम भ्रष्टाचार हुँदै दुब्लाउन पुग्दा विद्यालयको अवस्था दयनीय बन्ने गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा व्याप्त कमिशनको खेलले कतिपय प्रअ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई भने, चलखेल गर्ने मौका मिलेको स्रोतले जनाएको छ । २०६६ सालमा स्थापना भएको विद्या मन्दिर नेराप्राविमा कुल १२५ विद्यार्थी रहेका विद्यालयका प्रअ रामनारायण प्रसाद यादव बताउँछन् । जसमा ७५ प्रतिशत
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमय छ ?
- अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव २००३ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म भएदेखि लोकतन्त्रको लागि अथक बलिदान दिदै आएको जनताले करिब ६ दशकपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पायो । गणतन्त्र स्थापना गरेको सार्वभौम संविधानसभाको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र संस्थागत नगर्दै अवसान भएकोले राष्ट्रपति, आम जनता, नेता, बौद्धिक वर्ग तथा विदेशी मित्रहरूलगायतले उपलब्धि सङ्कटमय रहेको अशङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन् । यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । के साँच्चिकै उपलब्धि सङ्कटग्रस्त छ ? न्यायोचित विश्लेषण गरेर सुधारको उपाय पहिल्याउनु पर्छ । कुनै पनि व्यवस्था उपर सङ्कट जनताको आस्थामा भर पर्दछ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आम जनता नेताहरूबाट निकै वितृष्ण भएका छन् । जनताको नजरमा अहिले न कोही राजनेता छ, न कुनै नेता दूरदर्शी र इमानदार नै छ । जनताले नेतृत्वलाई गाली गरे पनि दलीय व्यवस्थाको विकल्प खोजी हाल्ने आकाङ्क्षा व्यक्त गरेको छैन । यहाँसम्म कि राजतन्त्र पक्षधर जनताले पनि लोकतन्त्रसहितको राजतन्त्र मागेको छ । संविधानसभाको विपक्षमा रहेका राजावादीहरूले पनि दलहरूको विकल्प खोजेका छैनन् । यस अवस्थामा लोकतन्त्रमाथि स्पष्ट कुनै सङ्कट
दशैं समयावधिमा भएका दुर्घटनाहरूमध्ये मोटरसाइकल दुर्घटनाका समाचारले प्रमुखता पायो । आइतवार, १२ गते मात्र देशको थुप्रै ठाउँमा मोटरसाइकल दुर्घटना भएको छ । यीमध्ये एउटा मोटरसाइकल बसमा ठोकिएको छ, दोस्रो टायर गाडामा, तेस्रो भैंसीसँग, चौथो र पाँचौं आपसमा र एउटा तीव्रगतिका कारण दुर्घटनामा परेको छ । सानो, स्थानीय समाचारपत्रमा समेटिएका यी घटनाबाहेक देशभरिको तथ्याड्ढ निकाल्ने हो भने कहालीलाग्दो अवस्था देखिन सक्छ । सबै मोटरसाइकल दुर्घटना दिउँसो भएको हुँदा चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्न सकिन्न । यी दुर्घटनामा दुई अलग–अलग ठाउँमा मोटरसाइकलमा सवार दुई महिलाको मृत्यु भएको छ । निश्चय नै यो खोजको विषय हो कि मोटरसाइकल कसरी बसमा ठोकियो, बसले सड्ढेत नै नगरी एक्कासि रोक्दा गति नियन्त्रण गर्न नसकेर मोटरसाइकल ठोकिन पुगेको हो कि ? वा बसले सड्ढेत दिंदादिंदै पनि मोटरसाइकल चालकले ध्यान नदिंदा वा ट्राफिकको ज्ञान नभएकोले दुर्घटना हुन पुगेको हो । जसरी सरकारले मोटरसाइकल चालकलाई हेलमेट लगाउन कडाइ गरेको छ, त्यसैगरी ट्राफिक नियमको जानकारी पनि हुनुपर्छ भनी कडाइ गर्न नसक्दा यस्ता दुर्घटना हुन्छन् । हाम्रा राजमा
अपहरणमा संलग्न अपराधीलाई मुक्त गरे अपहृतलाई छोड्ने शर्त
प्रस, वीरगंज, १२ कात्तिक/ पर्सा, मुडली गाविस निवासी दशरथप्रसाद कम्करको अपहरणमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले दुईजनालाई पुन: नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा बुझाएको छ। पक्राउ पर्नेमा वीरगंज, रानीघाट निवासी प्रदीपप्रसाद कलवार र भारतीय नागरिक मुन्नी खातुन रहेका छन्। कम्करको अपहरणमा संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ परेका दुवैलाई साधारण तारेखमा छाडिएको थियो। कम्करको अपहरण भएको आज १५ दिन बितिसकेको परिवारले जनाएको छ । अपहरणकारीले फोनबाट धम्की दिंदै फिरौती रकम माग गर्नुका साथै प्रहरी हिरासतमा रहेकी मुन्नी खातुनलाई मुक्त गरे दशरथप्रसादलाई छोड्ने अपहरितका छोराले बताएका छन्।
उपचार तथा पुुनर्वास सेवा केन्द्रमा चरम यातना
प्रस, वीरगंज, १२ कात्तिक/ उपचार तथा पुनर्वास सेवा केन्द्रले सेवाको नाममा चरम यातना दिएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ। काभ्रे, पाँचखालमा रहेको लाइफ भिएस एडिक्सन उपचार तथा पुनर्वास सेवा केन्द्रले यो घटना पुष्ट्याएको छ। वीरगंज–१४ श्रीपुर निवासी रमेशमेहर श्रेष्ठका १९ वर्षीय छोरा रोशनमेहर श्रेष्ठलाई उपचार गर्ने बहानामा चरम यातना दिएको समाचार स्रोतले जनाएको छ। श्रेष्ठ सुस्तमनस्थितिका व्यक्ति हुन् । उनी सबै कुरा सुन्ने तर बोल्न नसक्ने छन् र उनको उपचार हुन सक्छ भनी दाबी गर्दै सेवा केन्द्रका प्रशासनिक अधिकृत तेजशम्शेर जबराले श्रेष्ठलाई उपचारको लागि कात्तिक ५ गते आइतवार अभिभावकसँग ३ महिनाको उपचार खर्च रु. ४५ हजारमध्ये २० हजारसहित आफैं लिएर गएका थिए। सेवा केन्द्रमा लगी उपचारको नाउँमा ती युवकलाई मरणासन्न हुने गरी चरम यातना दिएको श्रेष्ठकी ठूलीआमा भानुदेवी श्रेष्ठले बताइन्। एक साता पहिले जबरा आफैं आई रोशन मेहरको मृत्यु भएको सुनाउँदा आमा शोकाकुल भएको भानुदेवीले बताइन्। छोरालाई लिन जाँदा रोशन जीवितै रहेको तर उनको पूरै शरीरमा नीलडाम तथा घाउचोटहरू लागेको देखेर उनलाई सो केन्द्रले यातना दिएको भानु
चाडपर्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण
आजको युग भौतिकवादबाट प्रेरित छ। प्रतिस्पर्धात्मक जीवनले गर्दा भौतिकवाद बढेको हो वा भौतिकवादले गर्दा जीवन शैली प्रतिस्पर्धात्मक भएको हो, त्यो खुटयाउने जमर्को यहाँ गरिंदैन, तर देखिएको तथ्य के हो भने आजको कठोरतम प्रतिस्पर्धाबाट केही छिनको उन्मुक्ति दिने कुनै सर्वोत्तम साधन छ भने त्यो हो चाडपर्व। हिन्दूहरूका दशैं, तिहार, छठ, होली होस्, मुसलमानहरूको इद, बकरिद होस् अथवा क्रिश्चियनहरूको बडादिन नै किन होस्, मानव जीवनलाई तारन्तारको भागमभागबाट मानसिक र शारीरिक विश्रान्ति दिने एउटा सशक्त माध्यम हो, जसको चाहना मानिसले मन वचन र कर्मले चाहेको हुन्छ। विश्रान्ति प्राप्त गर्नका लागि चाडपर्व नै किन चाहियो, मनोरञ्जनका अन्य साधन पनि त उपलब्ध छन् भन्ने कुरामा विचार पुर्‍याउँदा अन्य साधन अनिवार्य हुँदैन। मानौं कसैलाई मानसिक विश्रान्तिका लागि मनोरञ्जनको कुनै साधन सुझ्यो, जस्तै–सिनेमा हेर्न जाने, पार्कमा घुम्ने, होटलहरूमा गएर आफूलाई भुलाउने, पिकनिक जाने, भ्रमणमा निस्कने, तीर्थाटन गर्ने। कार्यक्रम पनि बनाइयो तर कुनै अपरिहार्य कारण आइपर्‍यो भने ती सबै कार्यक्रमलाई पन्छाउन सकिन्छ। तर चाडपर्वलाई पन्छाउन सकिन
विद्यार्थी र व्यक्तित्व विकास–१०
अनन्तकुमार लाल दास वास्तवमा भन्ने हो भने सुन्ने कला अरूको विश्वास जित्ने कला पनि हो। यदि तपाईं कसैको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन्छ भने उसलाई के लाग्दछ, तपाईं उसको कुराप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ र जुन बेला तपाईं बोल्नुहुन्छ उसले पनि तपाईंको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्छ। यसबाट अतिरिक्त फाइदा के हुन्छ भने उसको विश्वास हासिल गरेको हुनाले तपाईंका धेरै कुराप्रति ऊ सजिलै सहमत हुन्छ र कुनै कुराप्रति असहमत हुँदा पनि खुलेर विरोध गर्दैन। मेरो अनुभव के रहेको छ भने कसैकसैले धेरै बोल्ने तर कम सुन्ने गर्छन् । यसको मनोवैज्ञानिक कारण के हो भने जुन बेला हामी बोल्छौं हाम्रो मनोभावना (इगो) सन्तुष्ट हुन्छ। जति धेरै सुन्ने मानिस हुन्छन् हामी त्यतिकै सन्तुष्ट हुन्छौं। बोल्ने अवसर त्यसले पाउँछ जो योग्य हुन्छ, कुनै पदमा आसीन हन्छ। जस्तै कक्षा कोठामा तपाईं बोल्नुहुन्न, शिक्षकहरू बोल्छन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यसले कहीं न कहीं हाम्रो पद, अधिकार र योग्यताको अनुभूति गराउँछ । सुन्नुको अर्थ हो–समर्पण। सुन्ने मानिस बोल्ने मानिसको तुलनामा तल हुन्छ। बोल्ने मानिस सुन्ने मानिसभन्दा योग्य र माथि छ भन्ने अनुभू
मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको चाड बकर ईद शुरू
प्रस, वीरगंज, ११ कात्तिक/ मुस्लिम समुदायको चाड ईद–उल– फित्र अर्थात् बकर ईद आजबाट शुरू भएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले बकर ईद हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन्। बकर ईद मुस्लिम समुदायले हज तीर्थाटन र बलिदानको रूपमा मनाउँछन् । रमजानको ठीक दुई महिना १० दिनमा मनाइने यो पर्वमा हज गर्न जान चाहने मुसलमानहरू साउदी अरबको मक्का र मदिना जाने गर्छन्। यस्तै नेपालमा मुसलमानहरूले खसी, बोका, भेंडा वा बाख्राको बलि दिन्छन् भने अरबी मुलुकहरूमा भने ऊटको बलि दिने चलन छ। यो पर्व तीन दिनसम्म मनाइन्छ तर व्रत (रोजा) भने बस्नुपर्दैन । मुसलमान समुदायको महान् चाड बकर ईदको अवसरमा सरकारले आइतवार देशभर सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ। ईद–उल–फित्र (बकर ईद)को आज पहिलो दिन हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। पर्साको ग्रामीण भेग लङगडी, सेढवा, पोखरिया, अलौं, बिन्दवासिनी, बहुअर्वाभाटा, भिस्वा, सोनवर्सालगायत नगरक्षेत्रमा मुर्ली, श्रीपुर, छपकैया, गण्डक–बहुअरीस्थित ईदगाहहरूमा मुस्लिम समुदायले नमाज अदा गरी पर्व मनाएका छन्। अल्लाहको आदेशअनुसार हजरत इब्राहिमले ८० वर्षको उमेरमा पाएको आफ्नो छोरा इस्माइललाई कुर्बानी दिन
पहिचानसहितको सङ्घीयताले सम्पूर्ण समुदायको विकास हुने
प्रस, रौतहट, ११ कात्तिक/ एकीकृत नेकपा माओवादीका भोजपुरा राज्य समिति इन्चार्ज तथा पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभु साहले मधेसी, दलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायको पहुँच राजनीतिमा नभएसम्म उनीहरूको हकअधिकार सुरक्षित हुन नसक्ने बताएका छन्। झुन्खुन्वा गाविसद्वारा आयोजित भेटघाट तथा स्वागत कार्यक्रममा उनले सामन्ती राज्य व्यवस्था, एकात्मक शासन प्रणाली विस्थापित गर्न किसान, उत्पीडित, जनजातिलगायत सम्पूर्ण समुदायको पहिचानसहितको सङ्घीयता आवश्यक रहेकोले प्रतिगामी, यथास्थितिवादीलाइ समाप्त पार्नका लागि जनजागरण आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका थिए। भौतिक संरचना नभएसम्म मधेसको विकास नहुने बताउँदै उनले सरकार र सत्ताको जडमा नपुगेसम्म किसानको सुविधा, उत्पादनमा वृद्धि, बजारको आवश्यकता पूर्ति नहुने बताए। सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देशमा तरलता र जटिलता वृद्धि हुँदै जाँदा देशका राजनीतिक पार्टीहरू अभागी सिद्ध हुने बताए। स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हासिल गर्न शान्तिप्रक्रिया टुङगोमा पुर्‍याउन एकीकृत नेकपा माओवादी लागिपरे पनि यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारीले सरकारको राजीनामा माग गरि
–कुमार रुपाखेती नेपालीले हर्षोल्लासका साथ लामो समयसम्म मनाउने चाड बडादशैं हो। लामो बिदा, आफन्तहरूको आगमन, रक्सी, मासु र तासको सङगम आदि इत्यादि कारणहरूले गच्छेअनुसार रमाइलो गरी मनाउने बडादशैं–२०६९ भर्खरै हामी माझबाट बिदा भएको छ। प्रत्येक वर्षभैंm यसपालि पनि वीरगंज नगरीमा देखिएका केही कुराहरू तल उल्लिखित छन्। १) बहुचर्चित गहवामाई मन्दिर यस वर्षसमेत व्यवस्थित देखिएन। मन्दिर वरपर घटस्थापनादेखि नै फोहरका डुङ्गुर थुप्रिएको देखिन्थ्यो। तर वीरगंजेलीले आफ्नो घरदैलो आँगन सफा राखे। २) दशैं मान्न नेपाल फर्कनेहरूलाई भारतीय लुटेरा र सुरक्षाकर्मीहरूले दु:ख दिने, लुट्ने गरेकाले यसपल्ट वीरगंज नाकाबाट नेपाल भित्रिनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको थियो। यसअघि पश्चिमी नेपाली नाका प्रयोग हुन्थ्यो। ३) सिलाएको लुगा महँगो हुने भएकोले यसपल्ट रेडिमेड कपडा धेरै बिक्यो । टेलर मास्टरहरूले कम काम पाए। ४) यसपल्ट कालाबजारी चरममा रहेकोले सबैथोक महँगोमा किन्नुपर्‍यो । कुखुरा र खसीको मासुमा समेत भाउ वृद्धि गरियो। ५) सुरक्षाकर्मीको सतर्कताका बाबजुद मेला अव्यवस्थित थियो। तर मेलामा चोरी चकारी भएन। बरु व्यवस
नकआउट क्रिकेट प्रतियोगितामा वसन्तपुर विजयी
प्रस, वीरगंज, ११ कात्तिक/ विजयादशमीको अवसरमा गाविसको आयोजनामा पर्साको बिरञ्चीबर्वामा आयोजित नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज वसन्तपुर र बलुवाबीच भएको खेलमा बसन्तपुर विजयी भएको छ। बलुवाले पहिलो टस जिती ब्याटिङ गर्दै निधारित १४ ओभरमा पूरै विकेट गुमाइ ९८ रन बनाएको थियो। विजयी लक्ष्य लिई प्रतिउत्तरमा उत्रेको वसन्तपुरले १३ ओभरमा ४ विकेट गुमाइ १०० रन बनाइ विजयी भएको हो। आजको खेलमा म्यान अफ दि म्याच वसन्तपुरका राम कपुर भएका छन्।
तालिम प्राप्त कुकरद्वारा अपहृत श्रेष्ठ र चौलागाईको खोजी कार्य तीव्र
प्रस, निजगढ, १० कात्तिक/ सामुदायिक वन समूहका सदस्य र वन हेरालु अपहृत भएको १६ दिन नाघी सक्यो तर पनि उनीहरूको अवस्था पत्तो लाग्न सकेको छैन । दिन गुज्रँदै गएपछि मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौडाबाट तालिम प्राप्त कुकुर ल्याएर अपहरणमा परेका श्रेष्ठ र चौलागाईको खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ । शुक्रवार ल्याइएको रानी नामको तालिम प्राप्त कुकुरले निजगढ र रौतहटको कनकपुर सिम्री आसपास ज·ल क्षेत्रमा खोजी कार्य शुरु गरेको छ । यो तालिम प्राप्त कुकुर ट्रेगर अर्थात् अपराधमा संलग्न अपराधी र अपहृत गएको मार्ग पहिचान गर्न मदत पुग्ने मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, हेटौंडा डग सेक्शनका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक तोमबहादुर पुनले बताए । शुक्रवार दिउँसो करिब १२ बजेदेखि अपहृत श्रेष्ठ र चौलागाईको खोजीमा ६ घण्टा खटेका थिए । अपहृतले लगाएको कपडाको आधारमा खोजी कार्य थालिएको प्रहरी नायब निरीक्षक पुनले बताए । केही दिन पहिले काम गर्न पाएको भए घटना नजिक चाँडै पुग्न सकिन्थ्यो । असोज २५ गते बिहीवार ज·ल गएका श्रेष्ठ र चौलगाई अबेरसम्म घर नफर्केपछि गाउँलेहरूले वन क्षेत्रमा लगातार खोजी गरिरहेका छन् । बारा नि
खानेपानीको कारण बेस क्याम्प सुवर्णपुरको घेराउ
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ सुवर्णपुर–८ गढवालाइनका स्थानीयवासीले आज सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प घेराउ गरेका छन् । गाउँको खानेपानी सप्लाइ सशस्त्र प्रहरीले अवरोध गरेको भन्दै स्थानीयवासीले बेस क्याम्प घेराउ गरेका हुन् । सशस्त्र प्रहरील ज·लको मुहानबाट ल्याएको खानेपानीको सप्लाइ पटक–पटक अवरुद्ध पारेर दु:ख दिएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । हिजो बिहान पनि खानेपानी सप्लाइमा अवरोध गरेपछि स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रेका हुन् । डेढ–दुई सयको सङ्ख्यामा गढवालाइन बासिन्दाले सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प अगाडि प्रर्दशन गर्दै घेराउ गरेको सुवर्णपुर खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव विमल खड्काले जनाएका छन् । गाउँलेहरू खानेपानीको सप्लाइ अवरोधबारे सोध्न जाँदा निरीक्षक राईले गालीगलौज गर्नुका साथै धम्क्याएर पठाएको सचिव खड्काले गुनासो गरेका छन् ।
एक सातादेखि अपहरणमा परेका कमकरको अवस्था अज्ञात
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ मुडली गाविस निवासी दशरथप्रसाद कमकरको अपहरणमा संलग्न दोषीहरूलाई प्रहरीले रकमको भरमा उम्काउन खोजिरहेको आरोप पीडित परिवारले लगाएको छ । कमकरको अपहरण भएको ७ दिन बित्नलाग्दा पनि प्रहरीले खोजी गर्न कुनै पहल नगरेको आरोप परिवारजनले लगाएका छन् । उनको अपहरणमा रानीघाट निवासी प्रदीपप्रसाद कलवार र भारतीय नागरिक मुनि खातुनलाई पक्राउ गरेपनि कलवारलाई छोडिएको परिवारले जानकारी दिएको छ । भारतीय महिला खातुनलाई अहिलेपनि प्रहरी नियन्त्रणमा राखेको छ । कमकरलाई राति अबेरसम्म ४० लाख फिरौती तथा पक्राउ परेको महिलालाई छोड्न पीडितको छोराको मोबाइलमा निरन्तर फोन धम्की आइरहेको छ । कमकरलाई कामको बहानामा ७ दिन पहिले अपहरणकारीले फोन गरेर वीरगंज बोलाएको थियो । सोही दिनदेखि उनी बेपत्ता छन् । शुरुमा अपहृतको मोबाइलबाट २ लाख फिरौती माग भइरहेको उनका छोराले बताए । हिजो रातिदेखि भारतीय मोबाइलबाट ४० लाख तथा नेपाल प्रहरीको हिरासतमा रहेका भारतीय महिलालाई नछोडे ज्यान मार्ने धम्की आइइरहेको परिवारजनले बताएका छन् । यसबारे पर्सा प्रहरी उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारसँग बुझ्दा घटनाबारे अनुसन
प्रहरी तथा गाँजा तस्करबीच दोहरो भिडन्त
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ हिजो राति शड्ढरसरैयाबाट गाँजा बोकी भारत लगिरहेका गाँजा तस्कर तथा नेपाल प्रहरीका जवानहरूबीच झकरा महिसहानीमा दोहोरो भिडन्त भएको छ । दोहोरो भिडन्तको क्रममा प्रहरीले ११ राउन्ड गोली चलाएको छ भने तस्करले ४ राउन्ड चलाएको प्रहरी चौकी जानकीटोलले जनाएको छ । प्रहरीले दिएको जनकारी अनुसार सो ठाउँ भएर गाँजा तस्करहरू गइरहेको सूचना पाएपछि प्रहरी लुकीछिपी बसेको बेला भिडन्त भएको थियो । प्रहरीले १७ पोका अन्दाजी ४ क्विन्टल गाँजा बरामद गरेको जनाएको छ । ३०–३५ जनाको समूहमा रहेका गाँजा तस्करहरूले प्रहरीलाई देख्ने बित्तिकै गोली चलाएपछि प्रहरीले पनि जवाफी फायर गरेको समाचारमा जनाइएको छ । तस्करहरू गाँजा फ्याँकी भागेको प्रहरी निरीक्षक मनोहर भट्टले बताए । हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार जानकीटोल प्रहरीले आफ्नो इलाकाभन्दा बाहिर गएर गाँजा पक्राउ गरेकोले सो क्षेत्रको इलाका प्रहरी कर्यालय पोखरियाले सहयोग गरेन । सो नाकाबाट लामो समयदेखि गाँजा तस्करी भइरहेको पाएर प्रहरी चौकी जानकीटोलले कार्यक्षेत्र बाहिर हस्तक्षेप गरेको जनाइएको छ । इलाका बाहिर गएर प्रहरी चौकी जानकीटोलले हस्तक्ष
हतियारसहित एकजना प्रहरी नियन्त्रणमा
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ स्थानीय बासिन्दाले आधुनिक हतियार सिक्सर पेस्तोलसहित एकजनालाई पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् । पक्राउ पर्ने बैरियाबिर्ता–९ पिपरा टोल निवासी २५ वर्षीय विष्णु साह हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दिएको सूचना अनुसार गएराति पानपसलमा सामान्य विवाद हुँदा साहले सिक्सर निकाली धम्की दिंदा गाउँलेले पक्राउ गरी प्रहरी चौकी सुगौलीको जिम्मा लगाएका थिए । पक्राउ परेका साहलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा राखिएको प्रहरी निरीक्षक मनोहर भट्टले जानकारी दिएका छन् । हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार साह विगत लामो समयदेखि विभिन्न भूमिगत स·ठनमा आबद्ध रहेका र आत्मसमपर्ण गरी घरमा बस्दै आएका थिए । पीडितसँग प्रहरीले बयान लिइसकेको छ ।
चुरे संरक्षण ड्यामको ब्रेकर भत्कियो, क्रसरका कारण चुरे, वन, बस्ती जोखिममा
प्रस, निजगढ, १० कात्तिक/ चुरे संरक्षणका लागि ड्याम निर्माण गरिए पनि क्रसरको ज्यादति रोक्न राज्यकै निकायले बेलैमा चासो नदेखाएपछि ड्याम उच्च सड्ढटमा पुन: पर्दै आएको छ । बारा अमलेखगन्ज दुधौराखोलामा दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गरिएको ड्याम क्रसरकै कारण दिनानुदिन सड्ढटग्रस्त बन्दै गएको छ । चुरे पहाडसँग जोडिएर करिब ५६ लाखमा ७ सय मिटर लामो ड्याम निर्माण सम्पन्न भएको थियो । क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन चासो नदेखाउँदा ड्याममा प्रयोग गरिएको तारजालीको केही ब्रेकर भत्किएको छ भने बाँसको चचरा भत्किदो र जीर्ण अवस्थामा छ । चुरे फेद वरिपरि, खोला बस्ती नजिकै रहेका अधिकांश क्रसरले अझै पनि लोडर, डोजरले खोला बगरबाट ग्रेभल झिक्ने र बगरमुनि पुरिएका ढु·ा उत्खनन गर्दै क्रसरमा लैजाने गरेपछि चुरे पहाडसँगै ड्यामसमेत उच्च सड्ढटमा पर्दै आइरहेको छ । बगर उत्खननले सानै भेल बाढीले ड्यामलाई सुरक्षित राख्न निर्माण गरिएको तारजालीको ब्रेकरमा धक्का पुगेपछि ब्रेकर लडेको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन् । खोलाको सतह गहिरिंदै गएपछि चुरे स्खलनमा समेत बढोत्तरी हुँदै गएको स्थानीय जनताको राय छ । पछिल्लोपटक के
विजयादशमी, टीका र जमरा–जता गयो बारी, कर्कलाको घारी
- बैद्यनाथ ठाकुर मानव समाजमा चडपर्वलाई सभ्यता एवं संस्कृतिसँग जोडेर हेरिन्छ । प्रत्येक देश वा जातजातिका आआफ्नै सभ्यता, संस्कृतिहरू संसारभरि छन् । पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताबीच संस्कृतिभित्रका विकृतिलाई थाती राख्ने, सुधार गर्ने वा फाल्ने विवाद निरन्तर चल्दै आएको छ । यो विवादमा जहिले पनि ढिलोचाँडो नयाँ पुस्ताको नै विजय हुने गर्छ । पुराना समयको चक्रसँगै इतिहासको पानाभित्र थन्किन पुग्छ जुनकि निर्विकल्प छ । के गर्ने सबै वर्तमानले यस्तै नियति भोग्नै पर्छ । नेपाली समाज यतिखेर चरम परिवर्तनको दौरबाट गुज्रिरहेको छ । के राख्ने के नराख्नेबीच ठूलो द्वन्द्व छ । राजतन्त्र समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि एकथरी पुन: फर्किन्छ वा फर्काउन सकिन्छ भन्ने कसरतमा लागेको छ् । संसदीय व्यवस्था, जसले विगत १४ र्वामा नेपाली जनतालाई भोक रोग, गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा महँगीबाहेक केही दिन सकेन, तथाकथित प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाउँमा पुन: संसदीय व्यवस्थालाई नै गणतन्त्रको नयाँ लुगा लगाई जनकधिकारविहीन संविधानको घोषणा गर्न एकथरि संसद्वादी पार्टीहरू टुप्पीदेखिको बल प्रयोग गरी लागिपरेको छ । उही पुरानै अल्पमत र